အိုးအိမ်ဘဏ်များအတွက်ဘာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း? - YoungAfrica.com - Teles Relay
မူလစာမျက်နှာ » စီးပွားရေး »အိမ်ရာဘဏ်များအတွက်မည်သည့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း? - YoungAfrica.com
အိုးအိမ်ဘဏ်များအတွက်ဘာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း? - YoungAfrica.com
ဆီနီဂေါအိမ်ရာဘဏ်သည် Dakar အနီးရှိ Diamniadio မြို့ရှိစီမံကိန်းငါးခုမှ 30 ဘီလီယံ CFA ချေးငွေများကိုချေးယူခဲ့သည်။ JA အတွက်© Sylvain Cherkaoui
Mali မှ Ivory Coast သို့ Burkina Faso နှင့် Benin မှတဆင့်အပေါင်ခံချေးငွေများကိုမြှုပ်နှံသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏စွန့်စားမှုသည်မပြီးတော့ပါ။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်: ဆီနီဂေါ။
ဆီနီဂေါအိမ်ရာဘဏ် (BHS) သည်အောင်မြင်မှုမှအောင်မြင်မှုသို့ကူးပြောင်းသည်။ 10 ၏ဘီလီယံနှင့်ချီသော CFA ဖရန့် (ယူရိုသန်းသန်း) ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးချိန်တွင် 15 တွင် 9% မှ CFA Franc သို့ဟန်ချက်ညီသွားသည်။ ထို့အပြင်သူသည် 2018 379 မိသားစုများကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး Diamniadio စီမံကိန်း ၅ ခုအတွက် 220 ဘီလီယံကို CFA ၏ချေးငွေများကိုအသုံးချခဲ့သည်။ ဆီနီဂေါအစိုးရမှဒါကာကိုမဖော်ထုတ်ရန်တည်ဆောက်မည့်မြို့သစ်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ဤဆီနီဂေါနိုင်ငံ၏အောင်မြင်မှုသည်ဒေသန္တရအဆင့်တွင်ဟဘစ်တီဘဏ်များ၏စိတ်ပျက်စရာကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ Uemoa ဇုန်တွင်မာလီအိမ်ရာဘဏ် (BHM) မှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့သည် မာလီယန်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးဘဏ် (BMS), အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ကျက်စားရာနေရာမရှိပါ။ အိုင်ဗရီကို့စ်၊ Burkina မှ et ဘီနင်၏ ရောင်းခဲ့ကြသို့မဟုတ်မရှိတော့တည်ရှိ။ ယနေ့တွင်ဆီနီဂေါအိမ်ရာဘဏ်သာလုပ်ဆောင်နေသည်၊ BHM ၏အကြီးအကဲဟောင်းနှင့်ယခုအာဖရိကဘဏ်မာလီဘဏ်ဥက္ကchairman္ဌ Modibo Cisse ကိုအကျဉ်းချုံးထားသည်။
အဓိကအားဖြင့်အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြုပြီးအိမ်ခြံမြေကဏ္ supporting ကိုအထောက်အကူပြုရန်အဓိကထားသောဤအဖွဲ့အစည်းများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကတိတော်များကိုမလိုက်နာကြပါ။ B [B] ၏အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Mamadou Bocar Sy က“ [ဒါဟာ] သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အရည်အသွေးဟာတခြားနေရာတွေနဲ့မတူတဲ့အထူးစျေးကွက်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်အရင်းအမြစ်များ၏အရေးကြီးမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုသည်အထူးနည်းပညာတစ်ခုလိုအပ်သည် "ဟုရှင်းပြသည်။ ။
ကြီးမားသောအုပ်စုများသည်အလားအလာကောင်းများရှိသောအာဖရိကန်လူငယ်များကိုလောင်းကစားနေသည် - JeuneAfrique.com
ကျန်းမာရေး - Dakar / Paris: ကိုးကားနှိုင်းယှဉ်ချက် - JeuneAfrique.com
ယူရို 2020 - ယူနိုက်တက်ယူနိုက်တက် 2020 - ဒီ 'အတုအယောင်' ဒီသရေကျမှုဟာဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ပတ်သက်သည် - FOOT 01
NASA ၏ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းလှသောရေအောက် rover သည်ဂြိုဟ်၏သက်ရှိများကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော BGR ဖြစ်သည်
မက်ဒေါနား - သူမ၏ဖျော်ဖြေပွဲများအပြီးတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော (နှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်) ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနည်းလမ်း
အင်ဒရူးထွက်ခွာသွားဖို့အချိန်တန်ပြီ ... ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာတာလဲ - တော်ဝင်ကျွမ်းကျင်သူ Margaret Holder
အိန္ဒိယ - Medha Patkar ကသူမရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဆုံးရှုံးမှာလား RPO အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေသည် အိန္ဒိယသတင်း
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,776